Samsung Galaxy S6 ရောင်းချမှုသည်မျှော်လင့်ချက်များထက်ကျော်လွန်ခဲ့သည် Androidsis
Samsung က Galaxy S6 Edge ရောင်းအားဟာမျှော်မှန်းထားတာထက်အများကြီးပိုကောင်းနေပါတယ်
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က, Aprilပြီလ 10 ရက်နေ့တွင်အတိအကျကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူ Samsung Galaxy S6 နှင့် Galaxy S6 Edge တို့ကိုရောင်းချခဲ့သည် ကမ္ဘာတဝှမ်းစျေးကွက်၏ကျယ်ပြန့်အများစုအတွက်။
မျှော်လင့်ချက်များသည်အလွန်မြင့်မားနေပြီးပေးသွင်းသူများကသတိပေးခဲ့သည် Samsung Galaxy S6 Edge ၏သိုက်သည်မူရင်းမော်ဒယ်များထက်ပိုများသည်။ ကောင်းပြီ, Samsung ပင်၎င်း၏ S6 အကွာအဝေး၏ကြီးမားသောအောင်မြင်မှု, အထူးသဖြင့်နှစ်ဆ curved အစွန်းနှင့်အတူမော်ဒယ်အံ့သြသွားပုံရသည်; Samsung Galaxy S6 နှင့် S6 Edge တို့၏ရောင်းအားသည်မျှော်လင့်ချက်များထက်များနေသည်။
Samsung Galaxy S6 Edge ရောင်းအားတက်
ထို့အပြင်ကိုရီးယားထုတ်ဝေသော Yonhap News မှဖော်ပြချက်အရ Samsung Galaxy S6 နှင့် S6 Edge သည်မျှော်မှန်းထားသည်ထက်များစွာကောင်းမွန်သည်။ လွန်ခဲ့သောသုံးရက်ကစက်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်ရှိသူတစ် ဦး ကပြောကြားခဲ့သည် တောင်ကိုရီးယားတွင်ရောင်းအားစံချိန်တင်မြင့်တက်လာ \_ t ကျွန်တော်တို့အရင် Galaxy S မိသားစုတွေရဲ့ရောင်းအားကာလတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်။
Samsung Galaxy S6 Edge သည်သမားရိုးကျမော်ဒယ်များထက်ယူရို ၁၅၀ ပိုမို၍ စျေးကြီးသော်လည်းမိုဘိုင်းဖုန်းနှစ်ခုလုံးရောင်းအားသည်အညီအမျှရောင်းနေကြသည်။ တူညီသောအမည်မဖော်လိုသူအရာရှိတ ဦး က Samsung သည်ဤ terminal နှင့် ၀ ယ်လိုအားကိုကောင်းစွာတွက်ချက်ခြင်းမရှိကြောင်းအခိုင်အမာဆိုခဲ့သည် Samsung ၏ Galaxy S6 Edge ပြတ်လပ်မှုသည်တစ်လကျော်ကြာမြင့်နိုင်သည်။
ထိုအချိန်က Samsung သည်၎င်းကိုခန့်မှန်းခဲ့သည် သန်း ၄၈ သန်းကျော်ရောင်းချမည့် Samsung Galaxy S48 နှင့် S6 Edge ၂၀၁၅ ခုနှစ်မကုန်မီကမ္ဘာတဝှမ်းလုံး၌၎င်းနှုန်းထားအတိုင်းဆက်သွားပါကကွဲပြားခြားနားသောပြproblemsနာများမရှိဘဲဤကိန်းဂဏန်းကိုကျော်လွန်သွားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်အလွန်ယုံကြည်ပါသည်။
အခုတော့ပထမ ဦး ဆုံးအစီရင်ခံစာများကိုစောင့်ဆိုင်းဖို့အချိန်ပါပဲ Samsung Galaxy S6 နှင့် S6 Edge ရောင်းအား ဆိုးလ်အခြေစိုက်ထုတ်လုပ်သူအသစ်၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ပုံစံများကိုကြည့်ရှုရန်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » Samsung က Galaxy S6 Edge ရောင်းအားဟာမျှော်မှန်းထားတာထက်အများကြီးပိုကောင်းနေပါတယ်
အကောင်းဆုံးကတော့ Samsung အကောင်းဆုံးနည်းပညာပဲ။
Guillermo Garcia က ဟုသူကပြောသည်
အကောင်းဆုံး Samsung နည်းပညာကုမ္ပဏီမှသတင်းကောင်း !!!!
Guillermo Garcia သို့ပြန်ပြောပါ
Samsung ကအကောင်းဆုံးနည်းပညာကုမ္ပဏီ ??? ကျေးဇူးပြု၍ သင်ဖတ်ရန်လိုအပ်သည်မှာလူများသည်လှည့်စားခံနေရဆဲဖြစ်ပြီးတစ်ယူသန်ဆန်ခြင်းမှဘာမှမသိဘဲစကားပြောခြင်းထက်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်အရာမရှိချေ။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးနည်းပညာကုမ္ပဏီ! အရမ်းများလွန်းလို့ Apple တောင်မှသူမကိုထုတ်လုပ်ဖို့စောင့်နေတယ်။
သတင်းထူး! အကောင်းဆုံး Samsung
2p မျက်နှာပြင်နှင့် MediaTek MT1080 ပရိုဆက်ဆာပါဝင်သည့် Xiaomi Redmi Note 6795
[APK download] တွစ်တာတွင်ပြန်လည်စုဆောင်းထားသည့်အရှည်ဆုံးတုန့်ပြန်မှုစနစ်ကိုယခုရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်